ULeon Spinks wamele iUnited States njengombhokisi okhuselayo onzima kwiiOlimpiki zasehlobo zaseMontreal ngowe-1976 waza wawuthabatha indondo yeGold. Yena noMichael Spinks baba ngabazalwana bokuqala ukuphumeza iindondo zeGolide kwimidlalo efanayo kwiiOlimpiki ezifanayo. I-grin ye-gow-toothed-grated yaba yidumo lehlabathi.
Umsebenzi webhokisi we-post-Olympic kwi-Box Sping
Ngomhla kaFebruwari 15, 1978, kuphela ekulwa kwakhe kobugcisa obunesibhozo, i-spinks yachaza u-Ali Ali ngaphezu kwe-15 ukujikeleza i-world weightweight title.
Iipinki zalahlekelwa yintsimi ku-Ali emva nje kweenyanga eziyisixhenxe emva kwenkxaso engavumelekanga, ukulahlekelwa kwisigqibo esivumelanisiweyo esingu-15. Umsebenzi wakhe wangena kumsila ongenakunyuswa.
Ekulweni kokuqala emva kokubuyisana kuka-Ali, waxoshwa kwinqanaba lokuqala nguGerrie Coetzee. Nangona kunjalo, wabetha umxhatshaza we-WBC uBernardo Mercado ngokungqongqoza ukufumana umlo wokulwa noLarry Holmes ngo-1981. Waphulukana kwi-TKO ngeenxa yesithathu. Umntakwabo uMichael Spinks waqhubeka enqoba uLarry Holmes ngenxa yegama le-IBF elinzima kakhulu ngo-1985, kuba ngabazalwana bokuqala ukuba bawubambe isihloko senkundla yobunzima behlabathi.
ULeon Spinks waqala ibhokisi kwiqhekeza le-cruiserweight. Ukulwa kwakhe kwesigxina sokugqibela kwakunxamnye noDwight Muhammad Qawi kwi-WBA, owayethathe eso sihloko kuMichael Spinks. Ulahlekelwe yi-TKO kwinqanaba lesithandathu.
I-Spink yayinelahleko ephawulekayo ngo-1994 kwi-KO eya kuYohn Carlo, owayengumsebenzi wakhe wokuqala.
Ekugqibeleni walwa ngo-1995, ekupheleni kwirekodi yeprogram ye-26-17-3.
Ubomi Emva komsebenzi webhokisi kuLeon Spinks
I-Spinks kuthiwa ingenamakhaya nje kwiminyaka elishumi emva kokuphumelela kwesihloko esinzima. Kamva, emva kokuqhawula umtshato, wahlala kancinci kwindawo yakhe yokuhlala kwindawo yaseSt. Louis. Uye wabingelela kwindawo yokudlela yaseMike Ditka e-Chicago.
Kwakhona wancedisa ukuqalisa i-gym eDetroit kwaye wenza imisebenzi engavumelekanga eCalifornia.
Wahlala eColumbus, e-Nebraska waza wasebenza kwi-YMCA kunye noMcdalds. Kwakhona wavolontiya kwinkqubo yesikolo esilandelayo yolutsha. Wathuthela endaweni yaseLas Vegas ngo-2011 apho wayenomsebenzi oqinileyo kunye nokubonakala kwe-autograph-signing kwaye watshata nomfazi wesithathu, uBrenda Glur Spinks.
Ingxaki yeBongo kunye neNtlekele yezeMpilo
ULeon Spinks wafumanisa ukuba unengxaki yokugula ngengqondo ngo-2012 ngenxa yokulwa kwakhe emsebenzini kwaye iyingxenye yocwaningo olude oluqhutywe yi-neurologist uCharles Bernick weziko leLou Ruvo lezeBoin Health. Waya kwi-coma ngo-2014 ngenxa yesithambo esasifakwe kwintsana esahlaba amathumbu akhe. Waqhubeka unyango lomzimba kunye nonyango kwi-VA Southern Nevada yeZonyango. I-spink i-Marine Corp.
Ilifa likaLeon Spinks
Indodana ka-Spinks, iCory Spinks , yakuba yi-welterweight yangaphambili kunye neyona nto yincinci yehlabathi. ULeon wayevame ukubonakala kwindawo okanye kwienxa zonke kwikhonkco yonyana wakhe.
Ulahlekelwe ngunyana wakhe uLeon Calvin Spinks ngo-1990. Wayengumbhokisi okhuselayo onobunzima obetshutshiswe efile eneminyaka eyi-19 xa ehamba ekhaya e-East St. Louis.
Study Unit Unit - eNew Jersey
Ukwahlukana Phakathi kweBaleen kunye neeWhale